China ahaziri Custom elu àgwà ejiji owu kwaaji drawstring akpa Manufacturer na Supplier | Zhihongda
Ahaziri omenala elu mma ejiji na owu kwaaji drawstring akpa
AKWKWỌ NA MULTIPURPOSE DRAWSTRING BAG SET - Ezigbo maka nri nri dị ka nchekwa maka ọka, swiiti, mkpụrụ osisi na akwukwo nri, akwụkwọ, akpụkpọ ụkwụ, ihe nhụcha nke tii, yogurts, ihe ọ juiceụ juiceụ na mmiri ara ehi, akwụkwọ nri na ngwa nri n'ime broth, na-echekwa arịa kichin dị oke ọnụ. Nakwa dị ka a cheesecloth. Ndị a zuru oke maka ọfịs na ebe nchekwa ihe.
1. VATATILE AND MULTIPURPOSE DRAWSTRING BAG SET - Ezigbo maka nri nri dị ka nchekwa maka ọka, swiiti, mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, akwụkwọ, akpụkpọ ụkwụ, ihe nhụcha nke tii, yogurts, ihe ọ juiceụ juiceụ na mmiri ara ehi, akwụkwọ nri na ngwa nri n'ime ofe, na-echekwa kichin dị oke ọnụ arịa. Nakwa dị ka a cheesecloth. Ndị a zuru oke maka ọfịs na ebe nchekwa ihe.
2. NATURAL, UNBLEACHED, HEARVY DUTY MUSLIN CUTE POUCHES - Emebere na 100% Cotton / Muslin nke na-adịghị egbu egbu na enweghị ntụpọ. Kpochapu akpa rọba ma nyere aka chebe ụwa. Dochie ha jiri akwa uwe kachasị mma, dịkwa mma ma dịkwa nro na gburugburu ebe obibi na nchekwa.
3. IKE KWES LR L KWES SIR L AKW SIKWỌ AKW PKWỌ AKW --KWỌ AKW --KWỌ - Nnukwu ibu nwere ike ijide ọtụtụ ihe ka ị ghara inwe ọtụtụ njem mgbe ị na-azụ ahịa nri. Ọ bụ ibu fechaa mere na ha na-ukwuu obere.
4. AKW CKWỌ AKWOTKWỌ AKWOCKWỌ AKWTKWỌ AKW FORKWỌ AKW FORKWỌ N'ILỌ NA N'ANDLỌ - Mkpịsị aka ahụ siri ike, na-eguzogide akwa, ọ gaghị adị mfe ịdọpụ ma ọ bụ pụọ n'agbanyeghị ịdị arọ nke ihe echekwara, 100% kwadoro.
5.DIY CRAFTS, COTTON GIFT bags, AND Party FavorS - Na-arụ ọrụ ọhụrụ N'onwe Gị oru ngo? Akpa ndị a bụ maka gị! You nwere ike tee nke a ma ọ bụ ịke ma chọọ ha mma n'ụzọ ọ bụla ịchọrọ. Ndị a dịkwa mma dị ka oriri ma ọ bụ oriri agbamakwụkwọ ma ọ bụ dị ka akpa onyinye mara mma. Nye dị ka onyinye maka ụbọchị ọmụmụ, ekeresimesi na ezumike ndị ọzọ
Nkebi Aha Ahaziri omenala elu mma ejiji na owu kwaaji drawstring akpa
Ojiji Ppingzụ ahịa, Onyinye Nkwado, Nkwakọ ngwaahịa, akpa akwa, wdg.
Ihe onwunwe Owu akwa 100% owu, 4-20oz, 100gsm-570gsm, 6oz (175gsm), 8oz (230gsm), 10oz (280gsm), 12oz (340gsm)
Nha 10x15cm, 15x21cm, 20x25cm 25x30m 30x35cm 35x40cm ma ọ bụ ahaziri size.
Agba Natural agba, White, Black ma ọ bụ ahaziri dị ka kwa gị arịrịọ.
Mmechi Uwe owu, eriri ighikota, wdg.
Pesdị ewepụghị, square ala, gburugburu ala, square ala na gusset
LOGO Ahaziri logo
OEM & ODM Ee, anyị nabatara!
Mbipụta silk ihuenyo ebi akwụkwọ, foil bronzing na okpomọkụ nyefe-ebi akwụkwọ, Kwes sublimation obibi, Digital Printing, wdg
Wepụta oge 15-25 ụbọchị, dị ka ibu gị.
Mbukota 200 PC / katọn, ma ọ bụ dị ka ndị ahịa chọrọ
Mbupu ụzọ site n'oké osimiri, site n'ikuku, awara awara
Ihe nlele 1). sample oge: N'ime ụbọchị 3-5.
2). Sample ụgwọ: Dị ka ngwaahịa nkọwa.
3). Nkwụghachi ihe nlele: ee mgbe nnukwu
4). Sample nnyefe: gbasie, FedEx, DHL,
5). Ngwaahịa anyị bụ n'efu, mana ịkwesịrị ịkwụ ụgwọ ihe nlele
Oge ịkwụ ụgwọ 30% nkwụnye ego site T / T tupu, 70% itule site T / T tupu Mbupu
L / C, D / A, D / P, Western Union, Paypal, Visa, Debit Kaadị, Kaadị akwụmụgwọ
FOB ọdụ ụgbọ mmiri Chengdu ma ọ bụ Shanghai.
Silkscreen Printing: tinye aka na imewe nke nwere agba ole na ole.
Okpomọkụ Nyefee Printing: emetụta imewe na-ekpuchi obere na nwere otutu agba.
Digital Printing: tinye na imewe na-ekpuchi nnukwu ma nwee ọtụtụ agba.
Biko gwa anyị mbipụta akwụkwọ ịchọrọ ma ọ bụ zitere anyị ihe osise gị, anyị ga-akwado gị usoro obibi akwụkwọ kacha kwesị ekwesị.
Ọtụtụ mgbe, Anyị na-eji 6oz (175gsm), 8oz (230gsm), 10oz (280gsm), 12oz (340gsm) iji mee akwa akwa akwa. You nwere ike ịhọrọ ihe ndị ọzọ ọkpụrụkpụ dị ka ịchọrọ. Anyị nwere ike imeju arịrịọ gị niile.
Nwere ike ịhọrọ agba. Anyị na-enye akwa canvas ihe dị iche iche na agba. Ọtụtụ mgbe, Agba eke bụ ihe nkịtị. Biko gwa anyi udiri agba ichoro.
Anyị nwere ike ịme ọtụtụ ụdị akpa akwa akwa akwa. Ọ bụrụ na ị nwere imewe, nke ahụ ka mma. Ọ bụrụ n’inweghị ụdị ma ọ bụ echiche ọbụla, o nweghị ihe o mere. Anyị nwere ọtụtụ ahụmịhe nke imepụta akpa kwaaji akpa ma anyị nwere ike ịnye gị aro ụfọdụ.
Akpa akpa / Kanvas
Gwara mmanụ oyi akpa
Akpa Trolley na wiil
Akpa ịchọ mma akpa
1. Q: Enwere m ike ịhazi akpa m?
A: Anyị nwere ike ime akpa ndị ahụ dịka ihe ị chọrọ si dị.
2. Ajụjụ: Enwere m ike ibipụta akara nke anyị na ngwaahịa m.
A: Ee, Anyị nwere ike ibipụta akara ngosi gị na ngwaahịa gị. Naanị anyị chọrọ ka ị nye gị faịlụ akara ngosi gị na PDF ma ọ bụ usoro AI.
3. Q: Ego ole bụ ngwaahịa?
A: Ahịa na-ekpebisi ike site n'ọtụtụ ihe dị ka ihe onwunwe, ụdị, nha na wdg Ọ bụrụ na ị gwa m ngwaahịa a kapịrị ọnụ, anyị nwere ike ịnye ọnụahịa kacha mma maka gị.
4. Q: Gịnị bụ mmepụta oge?
A: 15-25 ụbọchị nkịtị, ọ dabere na oke. Biko gwa anyi ubochi ichoro, anyi nwere ike gbalie ike anyi imeju gi.
5. Ajụjụ: Ọ ga - ekwe omume ịnweta ihe atụ tupu ịtụ ahịa?
Azịza: Ee, n'ezie, n'ihi na àgwà & ihe onwunwe atule, ngwaahịa samples enweghị ahaziri ebi akwụkwọ nwere ike nyere kpam kpam na gị ozi ozi. Anyị ga-enwe obi ụtọ iziga gị ihe atụ n'efu.
6. Q: Ogologo oge ole ka ọ na-ewe maka oge mmepụta ihe?
A: ụbọchị 1 maka ụdị ndị dị ugbu a. 3-5 ụbọchị maka ahaziri n'omume.
7. Q: Kedu ka esi esi mpụ ahịa m? Akpa m ga-abịa n’oge?
A: Site n'oké osimiri, site n'ikuku, ma ọ bụ site na awara awara (UPS, FedEx, TNT) njem oge dabere
8. Q: Gịnị bụ usoro nke ịkwụ ụgwọ?
A: 30% T / T nkwụnye ego, 70% itule tupu nnyefe.
30% T / T nkwụnye ego, 70% itule megide BL.
100% n'ọdịnihu, L / C na anya, Western Union / Paypal maka obere ịkwụ ụgwọ.
9. Ajụjụ: Iji nweta nkọwa, kedụ ụfọdụ nkọwa dị mkpa ịgwa anyị?
A: Ihe, nha, ụdị, agba, profaịlụ njirimara, ogo akara, akara mbipụta akara, ọnụọgụ, na mkpa ọ bụla ọzọ.
Nke gara aga: Drawstring akpa eke agba oghere owu drawstring n'akpa uwe okike kwaaji ùkwù n'akpa uwe ike ibipụta logo
Osote: Ejiri mara mma Eco enyi na enyi Eco Black Joint Drawstring Canvas Backpack Bag
Nkwado Cheap 12oz Ebe obibi Black Kanvas ...
Akara-Bipute Organic Cotton Canvas Fabric Blank T ...
Fashion OEM na ODM Abụọ emefu Cotton Kanvas Sh ...
Drawstring akpa eke agba oghere owu na-adọta ...
White Black oghere Natural Kanvas Fabric Shoppin ...
Recycled larịị kwaaji owu Tote bag ejiri w ...